Nagarik Shukrabar - भोट कसलाई ?
आइतबार, १० असार २०७५, ०६ : २२
बिहिबार, २८ बैशाख २०७४, ०३ : ४३ | शुक्रवार , Kathmandu
जीतु नेपाल, हास्यकलाकार
यसपालि आफूले रुचाएकोलाई भन्दा पनि अनुसन्धान गरेर भोट हाल्नेछु । अनुसन्धानमा जुन ठीक लाग्छ ३० गते सोचेर ३१ गते भोट हाल्नेछु ।
चुनाव,चुनाव भन्छन् । के–के हो जस्तो भइरहेको छ । पदमा पुगिसकेपछि देश विकासमा आफ्नो योगदान दिनेलाई भोट हाल्न चाहन्छु ।
आजभोलि मेरो घरतिर हरेक दिन भोटका लागि हूल नै आउने गर्छन् । घरमै आएर भोट माग्छन् । हेरेर, केलाएर भोट दिन्छु । पहिले के योगदान दिएको थियो, विकासको काममा कत्तिको सक्रिय छ ? यी सबै कुरा हेर्छु । त्यसपछि भोट दिन्छु ।
अनुपविक्रम शाही, अभिनेता
नयाँ पुस्तालाई मौका दिने बेला आएको छ । आफ्ना एजेन्डालाई पूरा गर्ने सामथ्र्य भएको उम्मेदवारलाई भोट दिन्छु ।
नयाँ सोचका साथ सामाजिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउने खालका उम्मेदवारलाई भोट दिन्छु ।
रीमा विश्वकर्मा, अभिनेत्री
नयाँ ऊर्जा भएका व्यक्तिलाई भोट दिन उत्सुक छु । कुरामा मात्रै नभई काम पनि गरेर देखाउनुपर्छ उम्मेदवारहरूले । पुरानोलाई भन्दा पनि नयाँ विचार बोकेर अगाडि बढेकालाई भोट दिने विचार छ ।
असल व्यक्तिलाई भोट दिन चाहन्छु । पारिवारिक पृष्ठभूमि राम्रो भएकोलाई प्राथमिकतामा राख्दछु ।
पुरानाहरूको नेतृत्व त देखिसक्यौँ । अब स्वतन्त्र रूपमा नयाँ पुस्तालाई नै भोट हाल्नेछु । राजनीतिक अनुभव के कस्तो छ, यी सबै कुरा बुझेर राम्रो मान्छेलाई भोट हाल्नेछु ।
प्रस्तुतिः रचना श्रेष्ठ
मनीषलाई मिस गर्दै मलिना
नायिका मलिना जोशीले ‘आई एम सिङ्गल’ भने पनि अभिनेताहरुसँग जोडिएर आउने अफेयर्सको चर्चा कम भएको छैन । कहिले अभिनेता अनुपविक्रम शाहीसँग उनको नाम जोडिन्छ त कहिले सारुक ताम्राकारसँग ।
गायकको डिप लभमा केकी !
केकी त्यस्ती अभिनेत्री हुन्, जो व्यक्तिगत सम्बन्धबारे सधैँ जोगिदै आएकी छन् । फिल्मी क्षेत्रका उनका सहकर्मीहरुको नाम कसै न कसैसँग जोडिँदा उनी भने बचिरहेकी थिइन् । यो अवस्था फेरिन भने पाँच महिना नै काफी रह्यो । उनले आफ्नो प्रेम सम्बन्ध लुकाउन सकिनन् । उनको गुपचुप प्रेम बाहिरियो र उनी जोडिइन् पप गायक आर्जन पाण्डेसँग ।
'झुर' फिल्मको नक्कली सेलिब्रेसन
पछिल्लो समय नेपाली फिल्म वृत्तमा ‘लिलिबिली’जस्तै अधिकांश फिल्म समीक्षा र व्यापारका हिसाबले ‘झुर’ साबित भए तर अचम्मको कुरा तिनै फिल्मको सेलिब्रेसन भने तामझामपूर्ण र भव्यतापूर्ण थियो ।